युनिर्भसल मनोरञ्जन वर्गका सम्पूर्ण समाचारहरु
काठमाण्डौ । नेपाली साँगेतिक क्षेत्रमा गजल गायकका रुपमा परिचित सदाबहार गायक आनन्द कार्की र अहिलेकी ब्यस्त गायिका इन्दिरा जोशीले म्यानमारमा साँगेतिक प्रस्तुति दिने भएका छन् ।
भ्यालेनटाइम डे को अवसर पारेर म्यानमारमा रहेका नेपालीले कार्यक्रम आयोजना गरेका हुन् ।
‘लाग्छ मन हेरी रहु , ‘यी हल्लाहरु हुन तिमीले सुनेका’ जस्ता चर्चित गीतहरु कार्कीले गाएका छन्। जोशी पछिल्लो समयकी ब्यस्त युवा गायीका हुन्। टुटो तारा आकाशैमा, ‘फुलवुटे चोली अनि रातो घाँघर’ जस्ता गीत गायर चर्चामा रहेकी जोशी नेपाली आइडलवाट संगित क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी थिइन्।
यही माघ २८, २९ र फागुन १ गते म्यानमारमा उनीहरुले संयुक्त प्रस्तुति दिन यहि बुधबार उनिहरु म्यानमार जाँदैछन् ।
गायक कार्कीले भने यस अघि पनि म्यानमारमा साँगेतिक प्रस्तुति दिईसेका छन् भने इन्दीरा जोशी लगायतका अन्य भने पहिलो पटक कार्यक्रमा सहभागि हुदैछन् ।
म्यानमारका सङ्खाई धाममा बिशेष प्रस्तुति हुदैछ । म्यानमारमा रहेका नेपालीभाषी माझ यस्तो कार्यक्रम हुन लागेको हो। नेपाली गीत तथा संगितको संरक्षणका लागि म्यानमारका नेपालीको आयोजनामा सांगेतिक कार्यक्रम हुन लागेको हो। कार्यक्रमा युवा गीतकार प्रकासबाबु थापा (प्रकाशपुञ्ज) र खुस्बु प्रधान पनि पहिलो पटक म्यानमार जाँदैछन् । गीतकार प्रकाशपुञ्जले रचना गरेका गीतहरु पछिल्लो समयमा निकै चर्चित छन् । प्रकाशपुञ्ज पछिल्लो समय समाजसेवामा समेत सक्रिय छन् ।
२०४२ सालबाट गजलमार्फत सागीतिक यात्रामा प्रवेश गरेका गायक कार्कीले गजल, भजन, आधुनिक र चलचित्रका समेत गरी तीन हजारभन्दा बढी गीत गाइसकेकाछन् । इन्दिरा जोशीले डोरेमी संगीत एकेडेमीबाट संगीत सिकेकी हुन् । उनी सन् २०१७ को नेपाल आइडलकी निर्णायकको रूपमा परिचित छिन्।
काठमाण्डौ । लोक दृिष्ट थिएटरको प्रस्तुति रहेका लोक कथामा आधारीत नाटक सातुको कथा शिल्पी थिएटर बतिसपुतलीमा बिहिबारदेखि मञ्चन गरिएको छ । सोमबार सम्म मञ्चन गरिने नाटक हरेक दिन तिन सो गरिने छ । बिहान ११ दिउँसो १ र साँझ ५ बजे मञ्चन गरिनेछ । एउटा जोगीको कल्पनामा आधारित भएर तयार गरिएको कथा बस्तु निकै मार्मिक छ । समसामयिक बिषयबस्तुलाई आधार बन्नाएर तयार गरिएको नाटकका कलाकारहरुको बेजोड र जिबन्त अभिनय हेर्न सकिन्छ । प्रेम पौडेलको लेखन तथा निर्देशन सातुको कथा नाटकमा सेते जागीको भेषमा कलाकारमा प्रभाकर न्यौपाने मुखिया बासुदेव खनाल पितले पुस्प अवस्थी र चञ्चला साक्षी लम्सालको अभिनय रहेको छ ।
नेपथ्यबाट भने गायनमा गायत्री त्रिपाठी, सारसी खुम केसी, मादल, कमल ओलीले साथ दिएका छन् भने मञ्च ब्यबस्थापन, भेषभुषा चाँदनी शाहिको रहेको छ । नाटकमा मुख्य भुमिकामा उत्रिएका प्रभाकर न्यौपानेसाक्षी लम्साल, बासु खनाल र पुस्प अवस्थी को बेजोड अभिनयमा नाटक औधी राम्रो बनेको छ ।
गायक आनन्द कार्कीको स्वर तथा अभिनय
काठमाण्डौ । विगत तीन दशकदेखि निरन्तर रुपमा नेपाली साङ्गीतिक दुनियाँमा मीठा मीठा गीतहरू छोड्न सफल नेपाली साङ्गीतिक आकाशका अमर नक्षेत्र गायक आनन्द कार्की गजल गायनलाई नेपालमा भित्र्याउने पहिलो गायक हुन् । नेपालमा गजल गायनका पिता पनि भनेर पनि चिनिने गायक कार्कीको हाल सम्म १५ वटा एल्बमहरू बजारमा आइसकेका छन् । तीन दशक भन्दा लामो आफ्नो साङ्गीतक यात्राका दौरानमा गजल गायन लगायत, नेपाली सुगम सङ्गीत, नेपाली चलचित्र, आधुनिक लगायत विविध विधामा उनले आफ्नो गायन कौशल प्रस्तुत गर्दै एक अब्बल गायकको छवि बनाउन सफल भइसकेका छन् ।
गायक कार्कीको पछिल्लो एल्बम‟लभ यू फरेभर” हो । लामो समयदेखि गीत सङ्गीतका दौरानमा देश भित्र र बाहिर व्यस्त रहनेगरेका गायक कार्की तीन हजार भन्दा बढी गीतहरूमा आफ्नो स्वराङ्कन गर्न सफल भइसकेका छन् । हाल सम्म दश हजार भन्दा बढी स्टेज कार्यक्रमहरू पस्कन सफल बरिष्ठ गायक कार्कीले भर्खरै मात्र लण्डनमा तीन महिना भन्दा लामो समय आफ्नो प्रश्तुती दिएर फर्केका हुन् । हाल गायक कार्की समाजसेवी तथा गीतकार घनबहादुर थापाको एल्बम नबिर्स बजारमा ल्याउने तरखरमा जुटेका छन् जसमा गायक कार्कीलाई गायिका त्रयहरू क्रमशः अन्जु पन्त, निकिता थापा र सविना कार्कीले पनि गायनमा साथ दिएका छन् भने सङ्गीत भर्ने काम भने शक्तिवल्लभ, चर्चित सङ्गीतकार राजनराज सिवाकोटी, अर्जुन पोखरेल, शिखर सन्तोष, दीपक शर्मा, ताराप्रकाश लिम्बु ले गरेका छन् । एल्बम ‟नबिर्स” को नामाङ्कन भने गीतकार थापाकी धर्मपत्नी कृष्णा थापाको परिकल्पनामा जुरेको हो ।
एल्बम ‟नबिर्स”कै एक चर्चित गीत ‟फूल्न त फूल्यो गुराँसै फूल्यो अफ्ठ्यारो भीरैमा ...” बोलको गीतको म्युजिक भिडियो लोकार्पण गरिएको छ । जसको निर्देशन चर्चित भिडियो निर्देशक दीपेन्द्र के.सी. को निर्देशनमा कलाकारहरू क्रमशः अनिल थापा, श्रृष्टि गिरी लयायत पूराना रङ्गकर्मी उमेश मायालुको अभिनय रहेको छ भने स्वयं गायक आनन्द कार्कीको पनि विशेष अभिनय देख्न पाइन्छ । भिडियोमा काठमाण्डौं र भक्तपुरका विभिन्न मनोरम स्थानहरूको दृष्याङ्कनहरू देख्न सकिन्छ ।
काठमाडौँ, १६ साउन । साउनको तेस्रो सोमबार आज ५० हजार बोलबम यात्रीले सुन्दरीजलस्थित वाग्मती नदीबाट शुद्ध जल ल्याई पशुपतिनाथ मन्दिरमा अर्पण गरेका छन् ।
भोलेनाथ काँवरिया संघको आयोजनामा भएको सुन्दरीजल–पशुपति बोलबम यात्रामा बालकदेखि वृद्धसम्मले खाली गोडा ११ किमी हिँडेर जल अर्पण गरेका थिए । साउनको सोमबार शिवलाई शुद्ध जल चढाएमा मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास छ । अठार वर्षअघिदेखि सुन्दरीजल–पशुपति बोलबम मेला सुरु भएको हो ।
सुरुमा तराई÷मधेशका मानिस मात्र सो यात्रामा सहभागी हुने गरेकामा अहिले पहाडी समुदायका मानिसको संख्या पनि उल्लेख्य रुपमा बढ्न थालेको छ । तराईबासीले शिव मन्दिरमा शुद्ध जल चढाउँथे भने पहाडमा साउन महिनामा घरमै रुद्राभिषेक गर्ने प्रचलन थियो । तराई मूलका मानिसले सुन्दरीजल–पशुपति बोलबम यात्रा गरेको देखेर आफू यात्रामा पाँच वर्षदेखि सहभागी हुँदै आएको जोरपाटीका प्रल्हाद पुडासैनीले सुनाउनुभयो ।
पहेँला कपडामा सजिएका बोलबम यात्री खाली गोडा ठूलो स्वरमा ‘बोल बम’ अर्थात् ‘शिव भन्’ भन्दै ११ किमी यात्रा गर्दा बाग्लुङबाट काठमाडौँ आई अध्ययन÷अध्यापनमा लाग्नुभएकी इन्दिरा राना मगरलाई पनि आकर्षित ग¥यो । उहाँले आफू सात वर्षदेखि साउनको सोमबार सुन्दरीजल–पशुपति बोलबम यात्रामा सहभागी हुँदै आएको सुनाउनुभयो ।
यात्रीले लठ्ठी (काँवर) मा दुईतिर जल झुन्ड्याएर सो यात्रामा सहभागी हुने गरेका छन् । पछिल्ला वर्षमा काँवरविना नै बट्टामा जल हालेर पहेँलो झोलामा राखी ल्याउने भक्तजन बढ्न थालेका छन् । सुन्दरीजलबाट शुद्ध जल लिई आउनेलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पनि लाम नबसीकन जल चढाउने व्यवस्था गरेको थियो । कोषका निर्देशक एवम् गुठी तथा पशुपति मन्दिर शाखा प्रमुख भोला सिटौला बोल बम यात्राले नेपालको धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुगेको बताउनुहुन्छ । “यो यात्राको प्रवद्र्धन गर्न सके साउनमै धेरै भारतीय पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ, यसतर्फ सम्बन्धित सरकारी निकायका पनि ध्यान जानु आवशयक छ”–उहाँले भन्नुभयो ।
पशुपतिनाथलाई बाह्र ज्यातिर्लिंगको पनि शिर मानिएकाले भारतबाट समेत प्रत्येक वर्ष जल चढाउन दर्शनार्थी आउने गर्छन् । सुन्दरीजल–पशुपति बोल बम यात्रा भारतका विभिन्न स्थानमा गरिने यात्राभन्दा फरक रहेको यात्राका लागि आउनुभएका कमलेश अग्रवालले बताउनुभयो । साउनको तेस्रो सोमबार आज पशुपतिमा सवा दुई लाख भक्तजनले दर्शन गरेको कोषले जनाएको छ । बिहान साढे तीन बजेदेखि दर्शनार्थीका लागि पशुपतिका चार वटै ढोका खोलिएको निर्देशक सिटौलाले जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानन्यायधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले आज बिहान पशुपतिको दर्शन गर्नुभयो । उहाँले साउनको पहिलो सोमबारदेखि नै दर्शन गर्दै आउनुभएको छ । आज पशुपतिनाथ मन्दिरमा ३३५ र वासुकी मन्दिरमा ९४ विशेष पूजा भएको कोषले जनाएको छ ।
पेप्सीकोलास्थित प्राचीन एवं धार्मिक महत्वको प्रसिद्ध नागेश्वर महादेव मन्दिरमा आज झण्डै ६० हजारभन्दा बढी भक्तजनले पूजाआजा गरेका छन् । आज बिहान ३ बजेदेखि नै मन्दिरमा ठूलो भीड लागेको थियो । मन्दिरमा बिहान र बेलुका नित्य पूजा र साँझ हुने आरतीमा भारतका तीर्थयात्री समेत आउने गरेको समाजसेवी प्रकाश रायमाझीले बताउनुभयो ।
साउनमा नागेश्वरको दर्शन गर्नाले मुद्दामामिला र अनेकौँ झन्झटबाट मुक्त हुनाका साथै कालसर्प दोषसमेत निवारण हुने शास्त्रीय मान्यता रहिआएको छ ।
काठमाडौँ, १ असार । वाग्मती सफाइ महाअभियानको सद्भावना दूतमा नायिका मनिषा कोइराला मनोनीत हुनुभएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा महाअभियानको आज बसेको साप्ताहिक बैठकले नायिका कोइरालाको नाम अनुमोदन गरेको सफाइ अभियानकर्मी उमेश बोहराले बताउनुभयो । कोइराला यही असार ३ गते सञ्चालन हुने २१४औँ हप्ताको सफाइ कार्यक्रमदेखि सहभागी हुने महाअभियानले जनाएको छ ।
नायिका कोइरालालाई सद्भावना दूतको प्रस्ताव पूर्वसहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले राख्नुभएको थियो । आगामी शनिबारको सफाइ त्रिपुरेश्वरमा हुने भनिएकामा थापाथली पुलमा गरिने भएको छ ।
विसं २०७० जेठ ५ गते शनिबारदेखि हप्तामा एक पटक वाग्मती सफाइ हुँदै आएको छ । यहाँबाट प्रभावित भएर हाल देशका २६ स्थानमा सफाइ अभियान सुरु भएको महाअभियानले जनाएको छ ।
काठमाडौँ,। यस वर्षको मिस नेपाल (हिडन ट्रेजर) निकिता चन्दक हुनुभएको छ । प्रतियोगितामा सहभागी १९ जना युवतीलाई पछि पार्दै चन्दक मिस नेपाल २०१७ हुनुभएको हो ।
त्यसैगरी पहिलो रनरअपको उपाधि रोजिना श्रेष्ठ र दोस्रो रनरअपको उपाधि निति शाहले प्राप्त गर्नुभएको छ ।
रङ पत्रकारितासँगै साहित्यमा पनि परिचित नाम शान्तिप्रियले आफ्नो पहिलो एल्बम अधर बजारमा ल्याएका छन् । आफ्नो जन्मोत्सवको अवसर परेर राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै उनले एल्बम बिमोचन गरिएको हो । साहित्यमा लागेको झन्डै दुइ दशक बितिसक्दा बल्ल उनले एल्बम नै ल्याएका हुन् ।
चलचित्र संघका अध्यक्ष प्रदीपकुमार उदयको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा वरिष्ठ संगीतकार शम्भुजित बास्कोटा प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो भने वरिष्ठ कलाकार बसुन्धरा भुषाल, निर्देशक मोहन निरौला, साहित्यकार डाक्टर नवराज लम्साल विशिष्ट अतिथि रहनु भएको थियो । साहित्यकार डा. लम्सालले एल्बम भित्र समावेश गीतको समिक्षा समेत गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा अधर एल्बमभित्र समावेश स्रष्टाहरुलाई मायाको चिनो प्रदान गरिएको थियो भने केक काटेर जन्मदिनको अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान गरिएको थियो । यस एल्बमभित्र ५ वटा गीतहरु समावेश गरिएको छ ।
कविता उपाध्याय )
लिबाङ (रोल्पा), १६ जेठ ।
छोरा म¥यो युद्ध लड्दा, बेपत्ता छन् पति
खाली सिउँदो पुछिएका उठ चेली जति
पुस्ताँैदेखि रोल्पालीले पाएका छन् चोट
उम्मेदवार राम्रो छानी दिनुहोला भोट
रगतले मुछिएको यो रोल्पाली माटो
आफ्नै हातले हराभरा पारौँ देशको यो पाटो
आइतबार एकाबिहानै रोल्पाका विभिन्न बस्ती बस्तीमा पुगेर ¥याँइ¥याँइ सारङ्गीको मीठो धुनसँगै घोराही नगरपालिका दाङका मङ्गले गन्धर्वले यो मीठो गीत गाइरहँदा त्यहाँको वातावरण नै सङ्गीतमय बनेको थियो । पहिले गीत सुन्दा निकै उत्साहित बनेका युवायुवती गीत सुन्दै जानेक्रममा निकै भावुक बनेका थिए । गन्धर्व दाइले गीत गाइरहँदा यी गीतका शब्दले रोल्पाली आमामात्र रोएनन् कैयौँ बाबु पनि भक्कानिए ।
जवानीमै सिउँदो पुछिएका चेली, बुढेसकालमा काख रित्तिएका आमा, द्वन्द्वकै कारण अभिभावक गुमाएका टुहुरा बालबालिका, बेपत्ता पारिएका तथा घरबारविहीन भएर बाँचिरहेका विस्थापित परिवारका सदस्य सबैलाई भावविह्वल बनायो मङ्गलेको गीतले । उहाँले आधा दर्जन बढी गीत सुनाउनु भएको थियो । सबैजसो गीत महिला पक्षमा बोलिएको जस्तो अनुभूति हुन्थ्यो ।
कति गर्छाै दिदी बहिनी घाँसदाउरा र मेला
आएको छ देशको भाग्य आफैँ लेख्ने बेला
पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन देशका विभिन्न स्थानमा सम्पन्न भएपनि स्थानीय निर्वाचन रोल्पामा भने दोस्रो चरणमा हुने भएको छ । निर्वाचनका लागि प्रचारप्रसार सामग्रीसहित टोलटोलमा पुगेको ठूलो समूह मङ्गलेको गीत सुन्न एकै ठाउँमा झुम्मिएको थियो । मंगलेले गीतमात्र गाउनु भएन, उहाँले निष्पक्षरुपमा चुनावको प्रचारप्रसार समेत गर्नुभयो । उहाँले गाएका गीतका हरेक शब्द शब्दमा रोल्पाली जनताको आवाज बोलेको थियो ।
यसैबीच उहाँले दशवर्षे सशस्त्र युद्धका कारण पचास वर्ष पछाडि पारिएको रोल्पा र रोल्पालीले अझै पनि स्थानीय निर्वाचनमा विचार नपु¥याए रोल्पा अझै पछाडि पर्ने बताउनुभयो । उहाँले गीतका माध्यमबाट आगामी स्थानीय निर्वाचनमा हाम्रो होइन राम्रो, सक्षम, सबल र जनप्रिय उम्मेदवारलाई भोट दिनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।
हाम्रो होइन राम्रो नेता छानौँ दाजुभाइ
भोट दिउँ जनप्रिय उम्मेदवारलाई
उठ नारी च्यात अब बन्धनको जालो
जाग ब्यूझ जुर्मुराउ आयो तिम्रो पालो
चाउरी परेको अनुहार, फाटेका लुगा, काँधमा पुरानो झोला, टाउकोमा मैलिएर रङ नै नचिनिने आधा कपाल बाहिरै निस्किएको टोपी लगाएका मङ्गलेले आफू उमेरले करिब साठी वर्ष पार गरिसकेको बताउनुभयो ।
बाबु आमासँगै गीत गाउँदै हिँड्ने क्रममा ५÷६ वर्षकै उमेरमा सारङ्गी रेट्न सिकेका मङ्गलेले आठ नौ वर्षको उमेरदेखि नै यही पेसा अङ्गालेको बताउनुभयो । कतै माया पिरतीका, कतै उकाली ओरालीका कतै जीवन र जगतप्रतिको आफ्नो भोगाइका त कतै समसामयिक परिवेशका गीत सहित उहाँले ठट्यौलो पाराको गीत पनि गाउनुभएको थियो । ठट्यौलो पाराको गीत गाएपछि भने आँखामा आसु टल्पलाएका मुहारमा हाँसो छाएको देखिन्थ्यो ।
यसैबीच मङ्गलेले आधुनिकताको नाममा पश्चिमी संस्कृतिले नेपाली मौलिकतामा ठूलो ठेस पु¥याएको बताउनुभयो । उहाँले गीतको माध्यमबाट गन्धर्वका कथा ब्यथा सुनाउँदै लोक संस्कृतिको जगेर्नामा लाग्न सबै रोल्पाली युवालाई पे्ररित गर्नुभयो ।
गन्धर्वको कथा ब्यथा सारङ्गीले सुन्छ
भोको पेट नाङ्गो छाती कैले पूरा हुन्छ
बाँच्नै गाह्रो भयो हाम्लाई पिरैपीर बनी
सारङ्गीलाई माया गरौँ नेपाली हाँै भनी
बाँकी गीतलाई बीचमै रोकेर मङ्गलेले भन्नुभयो “सारङ्गी, मादल, मुर्चुङ्गा, विनायो, ट्यम्की, सनाही, ख्याम्टा आदि हाम्रा लोकबाजा हुन् तर यिनको बदलामा नेपालीहरु हारमोनियम, गिटार, किबोर्ड, तवला, बिंजु र बाँसुरीको धुनमा रमाउन खोजिरहेका छन् । यसकारण दिनप्रतिदिन देशमा लोकबाजा बजाउने मान्छेको अभाव हुँदै गएको उहाँको बुझाइ छ । त्यसैले लोकबाजाको संरक्षणका लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
लाहुरे बाका आँगनीमा रोदी गाँउथे पैले
सारङ्गी र डम्फू मादल ओझेल प¥यो ऐले ।
सम्पत्तिको नाउँमा हाम्रो यै सारङ्गी बाजा
बज्नै छाड्यो भन्छन्, सबले गाउँघरमा आज
उहाँका अनुसार पछिल्ला दिनमा एकाध गन्धर्वबाहेक सबैले आफ्नो गाइने पेसालाई छोडिसकेको हुँदा पनि यो पेसा सङ्कटमा पर्दै गएको छ । त्यसैले गाइने दाइको सारङ्गी र गाइने दाइको लोकभाका संरक्षणका लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ
काठमाडौं, १५ बैशाख । वल्र्ड डे १९९० को प्रस्तुति आधुनिक गीति एल्बम ‘लालीगुराँस’को बिमोचन रिपोर्टर्स क्लबमा गरिएको छ ।शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा सार्थक डिजिटल म्यूजिक प्रा.लि.ले पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त गीति एल्बमको बिमोचन गरेको हो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा बरिष्ठ संगीतकर्मी प्रेमध्वज प्रधानले उक्त गीति एल्बमको बिमोचन गर्दै नेपाली गीत मौलिक हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानले नेपाली गीत संगीत नेपाली जीवन र जगतमा आधारित रहेर निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिदै भने,‘नेपाली गीत–संगीतको ईतिहास गौरवले भरिएको छ, हाम्रो देशको पहिचान भनेको नेपाली गीत संगीत पनि हो, त्यसैले गीतहरू राम्रा बन्नका लागि शब्द मौलिक हुनुपर्छ, पछिल्लो समय नेपाली गीत संगीतलाई आधुनिकता दिने नाममा अश्लिलतातर्फ धकेल्ने प्रयत्न भैरहेको छ, यस कार्यप्रति युवा सर्जकहरू गम्भीर हुनुपर्छ।’ रोहित बस्नेतको शब्द र सुविर पन्तको संगीत रहेको उक्त गीति एल्बम बिमोचन कार्यक्रममा वरिष्ठ गायिका तारा थापालाई सम्मान गरिएको छ । सार्थक डिजिटल म्यूजिक प्रालिका प्रबन्धक जीवन पन्तले नेपाली गीत संगितको विकासका लागि विगत एक दशकदेखि निरन्तर लागि रहेको बताउदै भने,‘हामी युवाहरू नेपाली गीत–संगीतको विकासको लागि रातदिन नभनी निरन्तर लागिरहेका छौँ, पछिल्लो समय नेपाली गीत संगीतलाई मौलिकता भन्दा पर धकेल्न काम भैरहेको छ, यसलाई निरुत्साहित बनाउनको लागि हामी लागि परेका छौँ, आज प्रेमध्वज प्रधानलाई साँक्षी राखेर ‘लालिगुराँस’को बिमोचन गरेका छौँ, यो शब्द मौलिक, राष्ट्रिय अस्तित्व बोकेको शब्द हो, यस्ता काममा हामी निरन्तर लागि पर्नेछौँ।’ गीतकार रोहीत बस्नेतले ‘लालिगुराँस’मा समावेश भएका अधिकांश गीतहरू सकारात्मक सन्देश दिने दाबी गरे । चर्चित गायकहरु स्वरुपराज आचार्य, सन्तोस लामा, मेलिना राई, सागर पाण्डे, केशव बस्नेत र पविन गुरुङगको स्वर रहेको छ । कार्यक्रममा कृषि विकास बैंकका प्रबन्धक मुकुन्दराज पन्त, डा. दिनेश कुमार लम्साल, तारा थापा लगायतले लालिगुरासँको गीति एल्बमको सफलताको लागि शुभकामना दिएका थिए
भक्तपुर, १६ फागुन । वरिष्ठ हास्य कलाकार, लेखक तथा निर्देशक रामशेखर नकर्मीको आज बिहान निधन भएको छ ।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा उपचार गराइरहनुभएका नकर्मीको आज बिहान निधन भएको हो । उहाँ लामो समयदेखि क्यान्सरबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो । भक्तपुर नगरपालिका–६, इनाचोकका स्थायी बासिन्दा नकर्मी गत वर्षको भूकम्पले पुख्र्यौली घर भत्किएपछि वृद्धाश्रममा बस्दै आइरहनुभएको थियो ।
अद्वितीय प्रतिभाका धनी रामशेखरले आफ्नो जीवनको छ दशक हास्यव्यङ्ग्य लेखनमा बिताउनुभएको थियो । छ दशकको कला यात्रामा उहाँले व्यङ्ग्य लेखन मात्र नगरी आफैँले लेखेका प्रहसनहरुको निर्देशनका साथै त्यसमा अभिनयसमेत गर्नुभयो ।
विसं २०११–१२ सालदेखि कला क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएको थियो । त्यसपछि नेपाल भाषाका थुप्रै टेलिसिरियल, फिल्ममा अभिनय, लेखन तथा निर्देशन गरेका उहाँले कवि दुर्गालाल श्रेष्ठसँग संयुक्त रुपमा नेपालभाषाको फिल्म ‘राजमति’ को लेखनसमेत गर्नुभएको थियो ।
विसं २०११ मा उहा“ले पहिलोपटक ‘समाज सुधार’ शीर्Èकको नेपाली नाटकमा अभिनय गर्नुभएको थियो । त्यसपछि उहा“ले ‘साहसी महिला’ शीर्Èकको अर्को एउटा नेपाली नाटकमा अन्धो भिखारीको सानो भूमिकामा अभिनय गर्नुभएको थियो भने सो नाटकका लागि उहाँले ‘प्रभु लेऊ शरण म भिखारी’ बोलको यो गीत रचना गर्नुका साथै गाउनुसमेत भएको थियो ।
नेपाल भाÈामा धेरै कथा लेख्नुभएका रामशेखर नकर्मीका कतिपय कथा नेपाली भाÈामा अनुवाद भएका छन् भने ‘मत ख्याः’ कथा अङ्ग्रेजी र ‘नसंफाःगु चा’ जापानिज भाÈामा समेत अनुवाद भएका छन् । ‘नसंफाःगु चा’ शीर्Èकको एउटै मात्र उपन्यास लेख्नुभएका रामशेखरले सो उपन्यासबाट दुई प्रतिष्ठित पुरस्कार ‘श्रेष्ठ सिरपा’ र ‘गंकी वसुन्धरा सिरपा’ प्राप्त गर्नुभयो । नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको नेपाल भाÈाको पहिलो टेलिफिल्म ‘१२ बजे’ का उहा“ लेखक एवम् अभिनेता हुनुहुन्थ्यो । उहाँले लेखन, निर्देशन, अभिनय गर्नुभएको पःखा (पर्खाल) चलचित्रले जापानमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा ‘थर्ड फ्युचर अफ एसिया पुरस्कार’ पनि जित्न सफल भएको थियो ।
उहा“ले मह जोडीको ‘१५ गते’ र ‘लक्ष्मी’ लगायत नवीन सुब्बाको बहुप्रशंसित टेलिसिरियल ‘दलन’ तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा बनेको चलचित्र ‘वीर गणेशमान’ समेतमा अभिनय गर्नुभएको थियो । उहाँका चार छोरा र चार छोरी हुनुहुन्छ ।